I-Lynx - ikati elihle kakhulu, elihlala e-taiga. Lezi zilwane zasendle aziqondi ngokugcwele umuntu, ziyimfihlo futhi ziqaphele, akulula ukuthola kubo. Ngalesi simo samakati asehlathini, ahlala engacacisiswanga ngokuphelele ukuthi ahlangane kalula nomakhelwane womuntu, ahlala eduze kwendawo yokuhlala futhi akesabi ngisho nokuya emizaneni. Ebusika, abantu bangasebenzisa ngokukhululekile izindlela ezithathwe ngabantu. I-cat yasendle ayiyona into engavamile, ngakho-ke kuyoba okuthakazelisayo ukufunda ukuthi ihlala kanjani endle, ukuthi iyondla kanjani, ukuthi i-lynx izivikela kanjani ezitheni, zingaki izinkanyana ezizalwa ngonyaka ... Yonke yale mibuzo ingaphendulwa ngokufunda lesi sihloko.
I-lynx yaseYurophu: incazelo
Njengekati yangempela, i-lynx ihluke kwezinye izilwane ezidla izilwane ezinekhono elihle kakhulu lokukhwela izihlahla. Phakathi kwamagatsha uzizwa ukhululekile kakhulu kunomhlabathi. Lokhu kuhlinzekwa yisakhiwo somzimba wesilwane. I-cat-lynx ifana nenja enkulu ngobukhulu. I-torso emfushane, enesisindo, nomsila oqotshiwe. Ama-Paws ahlala nezihluthulelo ezinamandla ezingavamile. Ikhanda liyindilinga nge-cute "sideburns" ezinhlangothini, elihlotshiswe ngezindlebe ezinhle ezincantathu, amathiphu ayo ahlambalaza. I-muzzle isifushane ngamehlo abubanzi. Ubude bomzimba - 85-110 cm, umsila - cishe 25 cm, isisindo - cishe 10-15 kg.
Ubuchopho bukhulu kakhulu, bude futhi buthambile, buhle ikakhulukazi esiswini. Indwangu yesikhumba se-lynx inhle kakhulu: ibomvu nge-bluish-silvery noma i-tinge ebomvu. Ngemuva nangaseceleni i-krap ehlakazekile, ebusweni obomhlophe besisu nge-crab engavamile.
Isilwane siphila emahlathini ahlanganisiwe, ikakhulukazi ukuthanda ukuhlala ezindaweni ezingxenyeni ezinkulu zehlathi. Ngezinye izikhathi, uma kunesidingo, kungakwazi ukuhamba, ukukhuphukela ehlathini le-steppe kanye ne-tundra. Umzingeli ohlakaniphile - i-lynx, i-taiga imnika ithuba lokuzingela. Uhlala ehlasele abaqamekeleyo. Okokuqala ukhetha indawo elula futhi ulinde ukudla okufanelekile. Ukukhohlisa nokulinda, ngaphandle kokuhamba, ukuze ungaboni khona, i-lynx ingachitha amahora. Ngenxa yalokho, imizamo yakhe ihlale ivuzwa - ikati inikezwa nge-dinner noma kwasekuseni.
U-Predator uqaphele kakhulu, ukumbona ehlathini akunakwenzeka. Phakathi nosuku, uhlala endlini yakhe, kusihlwa, lapho eqala ukunyamalala, uyahamba ezingela. I-lynx izivikela kanjani ezitheni, ngoba iyingcosana futhi ayiyona into emangalisa njengoba ezinye izidumbu zomndeni wekati? Noma kunjalo, uyakwenza kahle, ngoba ikati elibonakala likhuphuka imithi kahle, likhuphuka kalula phezu kwamadwala, ligebha kahle, ligijima kude. Kuzo zonke ezingenhla, umuntu anganezela ukuthi unamehlo abukhali nendlebe encane.
Ukubamba okuyinhloko kwe-lynx kuyi-hare-hares, kodwa isilwane asenzi lutho. Uzojabula ngokudla inyoni noma i-rodent. Izitsha eziyizintandokazi zingama-partridges, ama-black grouse, ama-squirrels namagundane. Ngaphezu kwalokho, imenyu yekati elibomvu ihlanganisa ama-ungulates amakhulu kakhulu, njenge-musk deer, i-roe deer, i-spotted ne- reindeer. Ku-trot kwakungekho olambile, umuntu oyedwa ngamakhilogremu angu-20 ngosuku udinga cishe u-3 kg wezinyama, futhi uma isilwane silambile kakhulu, sithatha kalula u-6 kg.
Inyama yinyama, kodwa inhlanzi entsha iyadingeka nokuba isilwane esiyingozi, kodwa singadliwa kuphela yi-lynx entwasahlobo, ngaleyo sikhathi ejabulisayo lapho ikhula emanzini angajulile. Khona-ke ikati lingavele ligcwalise le nhlanzi nge-paw njengoba nje umphefumulo uyothanda.
Isikhathi sokuvuna ku-lynx siqala ngokuqala kwentwasahlobo. Kunezijaji eziningana ezilandela insikazi eyodwa, zilwa phakathi kwazo, zizwakala ngezwi elikhulu, ngezinye izikhathi ziyamemeza ngokukhululeka. Uma owesifazane ekhetha, empeleni, ekhetha owesilisa onamandla kakhulu, owazihlukanisa empini, i-lynxes idala umndeni wayo. Abathandi bathanda izindwangu zomunye nomunye, njengokungathi benga, bekhonkisana izinwele zomunye nomunye futhi ngobunene bomzimba.
Abazali bekusasa ndawonye bahlela umdanso womndeni, owenziwe ukunakekelwa ngezinwele, izimpaphe nodla. Indlu yendlu ingasebenza njenge-cleft rock, umhume womhlaba noma izimpande eziphendukile zomuthi owile.
Ukukhulelwa kuthatha izinsuku ezingu- 62-70, emva kwalesi sikhathi umndeni uphinde ugcwaliswe ngama-kittens angu-2-3. I-lynx cub izalwa iyimpumputhe futhi isithulu, isisindo esingaba ngu-300 g.
Ukuze ufunde ukuzingela, ama-kittens amancane aqala izinsuku eziyisikhombisa emva kokuzalwa. Abazali baletha ekhaya i-rodent noma inyoni, kodwa abanikeli abantwana. Ukukhipha kufihliwe eduze, futhi i-lynx cub iqala ukuyibheka. Nsuku zonke umama nobaba bami bacindezela umsebenzi wakhe. Ngenxa yalokho, kutholakala umzingeli omkhulu, hhayi ophansi kubazali bakhe.
Indlela i-lynx evikela ngayo ezitheni
Isitha esiyinhloko se-lynx indoda. Abantu bazingela lesi silwane ngenxa yobunandi obuhle futhi ngoba umhlambi uchitha imfuyo eminingi. I-lynx izivikela kanjani ezitheni ngendlela yabantu? Lapho umhlangano uzama ukufihla esihlahleni, ikati yokuqala ayifuni ukuhlasela umuntu. Uma umzingeli usaxoshwa, i-lynx eyalimala iyaba yande! Uyaphuma esifubeni sakhe bese ehlaba ngokujulile izibopho zakhe nezigqoko emzimbeni.
Ngesikhathi sasebusika, inqwaba yezimpisi nezimpisi zinezitha ezinkulu ze-trot. Akukaziwa ukuthi kungani izimpisi zizonda kakhulu i-lynx. Noma inyama iyiphunga, noma umncintiswano wezilwane ezidla inyama. Uma i-lynx ikhulile futhi inolwazi, khona-ke ibalekela ezimpileni esihlahleni, kodwa ngezinye izikhathi ikati elincane alikwazi ukuvimbela ingulube ngaphansi komuthi futhi yenza umzamo wokubaleka. Ngenxa yalokho, ngokuqinisekile ufile, izimpisi ziqede i-lynx ezivela emithini bese zibulala umbaleki owawa ngemuva kwakhe. Kuzovikelwa kokugcina ngezo zonke iziphawu ezine, kodwa ngokumelene nepakethe ngeke lime.
Amaqiniso anentshisekelo kusukela empilweni ye-lynx
Imikhuba eminingi nemikhuba yekathi elihle yasendle ayinakuqondakala. Ngezinye izikhathi isilwane lekhono liyamangaza!
1. Umkhuba we-lynx awukwazi ngokuphelele ukufihla inyamazane futhi ungabuyeli kuwo.
2. Izindlebe ezisezindlebeni zisebenza njenge-antenna yemvelo yokubamba umsindo ozwakalayo.
3. I-Lynx - i-jumper emangalisayo, iqhubekela phezulu kumamitha angu-4-4.5 ubude.
4. I-Euro-Asian trot imelana namaqhwa ama-degree angu -57.
5. I-paws yangemuva yenkathi yasendle ineminyaka engu-20% ngaphezulu kunaphambili, okwenza ikhono lokwenza izimpukane ezimangalisayo.
6. I-Lynx ingakwazi ukuphakamisa umsila wayo bese iyigubha njengenja. Kuze kube manje, akukazanga kunqunywa ukuthi i-cat yangendle ibangela kanjani.
Umfula iKuma: incazelo nesithombe
I-Frog Caviar: Ukudla okunomsoco, imithi kanye namakhorali
I-Cypress lake e-Anapa
Ihhashi elishaye. Ihhashi elihle kunabo bonke
"Izintaba zase-Yakut" zaseBelarus iyindawo enhle yabantwana nabantu abadala
Original party American
Umbala we-ombre yi-hit ehlobo ka-2013
Amaseva Terminal: incazelo, izilungiselelo
Ukhiye Inketho on a Mac, nezinye izingibe Apple ikhibhodi
Uyini Isipho "isisusa" futhi kanjani lona?
Ukukhethwa ehla nge ukhilimu
Boxing - Iyini? Imithetho, ukuqeqeshwa, imincintiswano
Yini isitofu egalaji ingasetshenziswa?